Onodi - Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.
CNC machining omumuihe
Voelry kwadebere nke ọma-nzukọ CNC machining omumuihe, nke nwere ike izute na-amụba ikike nke ndị ahịa na àgwà chọrọ nke ngwaahịa. CNC 4-axis machining na CNC 5-axis igwe kwesịrị ekwesị maka mgbagwoju machining akụkụ, na-ebelata ugboro ugboro clamping, na huu ngwaahịa mma; Site tụgharịa na-egwe ọka mgbagwoju nhazi, nwere ike mezue akụkụ dị mgbagwoju anya.
CNC lathe machining ogbako
CNC lathe machining ogbako kwesịrị ekwesị maka n'ichepụta nile di iche iche nke nkenke ngwaike akụkụ, dị ka igwe anaghị agba nchara nkenke akụkụ, aluminum alloy nkenke akụkụ, ọla kọpa alloy nkenke akụkụ; CNC lathe igwe nwere ike izute machining chọrọ nke nkenke nnukwu ngwaahịa, Automatic-lathe igwe bụ ihe kwesịrị ekwesị maka n'ichepụta nkenke aro akụkụ, dị ka ogologo aro nkenke akụkụ, nkenke ịghasa aro n'ichepụta, wdg
Site na otutu ulo oru nkenke nkenke nkenke ulo oru site na 30T rue 200T, anyi nwere ike iru nkenke nkenke nkenke dika nkpogide na-aga n'ihu, ntughari ohuru ngwa ngwa, na uzo hydraulic, wdg.
Nzukọ Radiator modul nhazi ogbako
Nchịkọta ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ bụ ihe bụ isi nke ụlọ ọrụ ahụ ruo ọtụtụ afọ, usoro mmepụta nke tozuru etozu, usoro mgbakọ zuru ezu, na njikwa njikwa 10 nke ọkụ ọkụ na-agba ume iji hụ na arụmọrụ arụmọrụ nke ikpo ọkụ ọkụ.
E nwere ọtụtụ ụdị nke radiators, gụnyere ikuku mgbasa ozi usoro radiators na mmiri mgbasa usoro radiators. Ngwaahịa ndị bụ isi gụnyere radiators LED, radiators CPU, radiators nche, igwe ọkụ eletrik, ndị na-ekpo ọkụ inverter, wdg.